बधाई छ जुम्ल्याहा टिकटक जोडीलाई  - प्रतियोगिता - साप्ताहिक
बधाई छ जुम्ल्याहा टिकटक जोडीलाई । स्वर, स्टायल, अनुहार, हँसाइ, बोलाइ सबै राम्रो छ । तपाईंहरूले निर्माण गर्ने धेरैजसो गीतचाहिँ नेपाली रिमिक्स र नेपाली फिल्मी गीतकै होस् ।
एउटा सानो योजनाका निम्ति पनि नियम आवश्यक हुन्छ । (पारिश्रमिक नपाउनेहरू) यदि नियमअनुसार चलेको छ भने योजना सफल हुने ८० प्रतिशत सम्भावना हुन्छ । अभिनय गर्ने क्रममा जब कलाकारलाई आफ्नो श्रमको प्रतिफल नआउने तनाव हुन्छ तब उसले कसरी आफ्नो क्षमता स्वतन्त्र तरिकाले प्रस्तुत गर्न सक्छ ? अनि कसरी त्यो सिनेमाले सफलता प्राप्त गर्नु ?
केही अघोरीले सार्वजनिक रूपमै मृत शरीरसँग यौनसम्पर्क गरेको कुरा स्वीकार गरेका छन † सुन्दै अचम्मित पार्ने, दिगभ्रमित तुल्याउने कुरा । (के अघेरीहरू साँच्चिकै डरलाग्दा हुन्छन् ?) यसरी मृत शरीरसँग यौनसम्पर्क गर्ने, सामान्य मानवीय मूल्य–मान्यता पालना नगर्ने के हामी मनुष्य नै हौं ? मैले त यसरी बुझेँ— मृत्यु भएको शरीर बलात्कार गर्नेलाई अघोरी भनिँदो रहेछ ।
अघोरीहरू शिवजीका महाभक्त हुन् भने (के अघोरीहरू साँच्चिकै डरलाग्दा हुन्छन् ?) मान्छेको मासु खानु भनेको जीवनसित निराश हुनु हो ।
बेला–बेला त समाचार पढ्दा पनि मन प्रफुल्लित हुन्छ । (इन्काउन्टरमा मारिए भैरहवाका डन) पीडितहरूका लागि योभन्दा ठूलो समाचार अरू केही हुँदैन ।
हेम घिमिरे, रामकृष्ण बजगाईं
यो घटना भयो, आफ्नो ठाउँमा छ तर यसरी उषा–किरणको नाम जोडेर हाइलाइट गर्दा गुन्डाकै आफन्तमा प्रतिशोधको सिर्जना हुन सक्छ र भोलि फेरि अर्को दुर्घटना हुन सक्छ । (इन्काउन्टरमा मारिए भैरहवाका डन) त्यसैले समाचार सम्प्रेषण गर्दा थोरै भए पनि संयम अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
कुमोद ढुंगाना जहाँ पुग्छन् त्यहाँ प्रहरी आतंक चल्छ । (इन्काउन्टरमा मारिए भैरहवाका डन) किनभने उहाँमा मान्छे मार्ने लत बसेको छ ।
जति खर्च गरे पनि, जुन कलाकारलाई अभिनय गराए पनि सिनेमाले दर्शकलाई अन्तरआत्मादेखि सन्तुष्टि प्रदान गर्न सक्दैन (कहाँ चुक्यो भिलेन ?) केही अपवादबाहेक । किनभने त्यसका निम्ति फरक सोच आवश्यक छ, नेपाली दर्शकको मनोवैज्ञानिक चाहना सम्बोधन गर्ने । सबै चिजबिजमा परिवर्तन आएको छ, त्यसैले नेपाली सिनेमा निर्माण गर्नेहरूको मानसिकता पनि परिवर्तन होस् ।
पुस–माघको जाडोमा वर्षा कहाँ हुन्छ त ? (चौका दाउ : लगानी उठाउन धौधौ) यो बेला त चिसो स्याँठ नै चल्छ ।
जवानी सम्हाल्यो भने त्यो अघि बढ्छ, उसले अथाह पैसा कमाउन सक्छ । (जवानी एक अर्थ अनेक) तर ऊ जवानी सकिएपछि पछुताउँछ, जीवनमा निराशा छाउँछ । त्यसैले जवानीसँगै चल्न सिक्नुपर्छ, पछुतो त हुन्छ धनको, जीवन निराशचाहिँ हुँदैन ।
अथाह सम्भावनाले मात्र के गर्न सकिन्छ र ? (नेपालमै अथाह सम्भावना छ) पुँजीवाद र सामन्तवाद हावी भएको देशमा कुनै अवसर देख्नुहुन्छ भने तपाईंले दिने अवसरको ग्यारेन्टी लिनुहोस्, जुन अवसरले चार जनाको परिवारलाई आज खायो, भोलि के खाने भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना होस् । त्यसपछि मात्र अथाह अवसरभन्दा राम्रो होला कि ?
हामीलाई अथाह होइन, थाह सम्भावना चाहिएको हो । (नेपालमै अथाह सम्भावना छ) । लटरपटर कुराभन्दा ठोस कुरा गर्नुपर्‍यो ।
चन्द्र मेघी गुरुङ
प्रकाशित :माघ १३, २०७५
टिकटक भाइरललाई जालमा पार्न बले र कक्रोजको भिडन्त
टिकटक एकाउन्ट छैन
के ले चर्चित बनायो आफैं कन्फ्युज छु
देशैभरि एसईई सुन्दर सुन्दरी छान्ने लहर चैत्र २४, २०७५
मिसेज टप अफ द वल्र्डको उपाधि अलिनालाई चैत्र १०, २०७५
भिडियो प्रतियोगितामा मेरो गाउँ मेरो ठाउँ पुस २७, २०७५
आशिकलाई ट्राडिसनल ड्रेस अवार्ड मंसिर २, २०७५
एकैसाथ ३ सौन्दर्य प्रतियोगिता कार्तिक २८, २०७५
छैटौं संस्करणको नेपाल गोल्डेन आइडल कार्तिक ७, २०७५
सुन्दरी खसी आश्विन ३०, २०७४
दोस्रो 'राष्ट्रिय एफपीजीए डिजाइन प्रतियोगिता २०१७' सम्पन्न श्रावण ४, २०७४
समिप बने मिष्टर एसएलसी नेपाल २०१७ जेष्ठ १५, २०७४
समिप बने मिष्टर एसएलसी नेपाल २०१७ जेष्ठ १४, २०७४